Bannister Lake mamita ny Tetikasa fampidirana Chameleon sy ny fampandrosoana manokana amin'ny RFD-TV | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » Bannister Lake mamita ny Tetikasa fampidirana Chameleon sy ny fampandrosoana manokana amin'ny RFD-TV
Tetikasa maro lafiny manavao ny fizotry ny famokarana, manolo ny mpamatsy angon-drakitra ara-bola, ary mampiditra rafitra lalao filalaovana sary vaovao manohana ireo tapakila an-tserasera sy sary ara-bola feno
Bannister Lake faly manambara anio fa nahavita tetik'asa lehibe iray ho an'ny fambolena sy fiompiana malaza RFD-TV fantsona fomba fiaina any ambanivohitra. RFD-TV dia an'ny Rural Media Group, INC. (RMG). Ny fananana RMG dia ahitana ny The Cowboy Channel sy ny Rural Radio Sirius XM fantsona 147. Ny tambajotram-pifandraisana Nashville dia manome fandrakofana be dia be isan'andro momba ny tsena entana sy ny vaovao momba ny orinasa liana manokana amin'ny indostrian'ny tantsaha.
Ny RFD-TV dia nitaky an'i Bannister Lake hanara-maso fanavaozana maro hafa, anisan'izany ny fifindrana amin'ny mpamatsy angona vaovao, fampidirana ireo angon-drakitra tena izy ho lasa maotera misy sary nohavaozina, mamorona sy manome tsindry kiritika sary ary mamolavola sy manangana rindranasa mahazatra mamela ny on-air talenta hisafidianana, hanovana ary hifehy ny filalaovana sary.
Bannister Lake dia niasa ho mpampifandray an'i Barchart mpamatsy angona sy ny fantsona hiantohana fa nahazo ny atiny ara-bola sy fanontana notakiana ny mpanao gazety RFD-TV. Ny ekipan'ny fampandrosoana sy ny tetikasa ao amin'ny Bannister Lake dia niara-niasa akaiky tamin'ireo manam-pahaizana momba ny angona Barchart sy ireo mpiasa injenieran'ny RFD-TV mba hiantohana fa niasa tsy nisy kilema ireo antso data an'ny RFD-TV. Ny rindranasa ara-bola ao amin'ny Lake Bannister dia nanome ny vatofantsika hita maso amin'ny vidin'entana amin'ny fotoana tena izy ary ny fahaizana mamorona tabilao ara-bola sy latabatra misy sary. Avy eo dia hampiasa ilay rindranasa i Anchors mba hiteraka playlists misy sary sy hitondra ireo lisitra eny amin'ny rivotra nefa tsy hiditra ao amin'ny efitrano fanaraha-maso.
"Bannister Lake dia nanolotra RFD-TV fomba vaovao hamoahana ny angon-drakitra tena izy avy amin'ny mpamatsy angon-drakitra anay ary hanome ny ekipan-dahatsoratray ny fanaraha-maso ilain'izy ireo hanamboarana izany atiny izany," hoy i David Mitchell, Chief Technology Officer, RMG. "Ankoatry ny famokarana sy ny fikajiana ny tapakila, dia nampijanona ny zotram-pamokarana izahay tamin'ny alàlan'ny fampandehanana ny workflow sary manontolo avy eo amin'ny birao vatofantsika."
Ny rindranasa ara-bola dia nahitana singa fitantanana sponsorship izay ahafahan'ny RFD-TV mandahatra sy manatanteraka ny logo an'ireo mpanohana mifandraika amin'ny tabilao sary manokana. Ny vahaolana dia mamokatra ho azy ireo hazo mba hampifanaraka ny fiakaran'ny sary am-barotra amin'ny varotra dokambarotra. Ity vahaolana ity dia manome fikorianam-pahombiazana mahomby kokoa, sady mitantana ireo vola miditra amin'ny fidiram-bola vaovao.
“Faly izahay mahita ny RFD-TV mandray an'i Chameleon sy ny vahaolana amin'ny rindrambaiko mahazatra. Ny tetikasa dia maneho izay ataontsika tsara indrindra, ny famakiana sy ny fidirana amin'ny angon-drakitra momba ny tahiry tena izy ary ny fanomezana ireo mpamokatra sy ekipa fanonta fitaovana ilain'izy ireo hanaparitahana an'io votoaty io ho an'ny mpijery araka izay tratra ”, hoy i Georg Hentsch, filoha, Bannister Lake.
Ho fanampin'ny fanamafisam-peo ho an'ny RFD-TV, namorona tapakila ho an'ny The Cowboy Channel koa i Bannister Lake. Ny tambajotram-pahitalavitra 24 ora dia natokana ho an'ny fanatanjahantena andrefana anisan'izany ny fitaterana omby, ny fangalarana volo, ny fanarenana ary ny hazakaza-barika. Chameleon dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fakana sary an-tsaina ny valiny, ny laharana ary ny fandaharam-potoana.
Momba ny RFD-TV
RFD-TV no tambajotra voalohany ho an'ny Rural Media Group. Nalefa tamin'ny Desambra 2000, RFD-TV no tambajotram-pahitalavitra 24 ora voalohany an'ny firenena ahitana fandaharana mifantoka amin'ny fambolena sy fiompiana ary ny fomba fiainana any ambanivohitra, miaraka amin'ny mozika sy fialamboly nentim-paharazana. RFD-TV dia mamoaka vaovao mivantana mandritra ny adiny enina isan-kerinandro hanohanana an'i Amerika ambanivohitra ary fantsona tariby tsy miankina mahaleo tena misy ao amin'ny trano maherin'ny 52 tapitrisa ao amin'ny DISH, DIRECTV®, AT&T U-Verse, Charter Spectrum, Cox, Comcast, Mediacom, Ny rohy tampoka, ary ny rafitra kabla any ambanivohitra maro hafa. Ho fanampin'izany, ny RFD-TV dia azo alefa an-tserasera amin'ny alàlan'ny RFD-TV Now at watchrfdtv.com, DIRECTV IZAO, Roku, iOS, Android, Firestick, Apple TV, ary fonosana Heartland Extra an'ny Sling TV. Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho azafady RFDTV.com.
Previous: Ny fanatsarana ny transcoding ao anatin'ny Telestream Vantage dia mametraka fenitra vaovao amin'ny fampidirana haitao fampiroboroboana haino aman-jery
Next: Ooyala Flex Media Platform Fanavaozana manolotra fanaraha-maso tsara kokoa amin'ny vidin'ny rahona sy ny fandefasana programa manerantany